လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သည့်ရောဂါများ - Thiloyarmay ׀ ဖိုမ ဆက်ဆံရေးနှင့် မျိုးဆက်ပွား ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ မေးလိုရာ
Thiloyarmay ׀ ဖိုမ ဆက်ဆံရေးနှင့် မျိုးဆက်ပွား ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ မေးလိုရာ > ကျွန်မတို့ကိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ် > လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သည့်ရောဂါများ
လိင်ဆက်ဆံရာကတဆင့် ကူးစက်နိုင်တဲ့ ရောဂါပိုးတွေကို ဘယ်လို စစ်ဆေးမှုခံယူမလဲ?
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လိင်ဆက်ဆံရာကတဆင့် ကူးစက်တဲ့ရောဂါပိုးတွေကို ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ အများပိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံတွေမှာ အခမဲ့ စစ်ဆေးမှုခံယူလို့ရပါတယ်။သီးသန့်ဆေးရုံတွေမှာလည်း စမ်းသပ်လို့ရပြီး ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ ရောဂါစစ်ဆေးရှာဖွေတဲ့ ဓါတ်ခွဲခန်းတွေမှာလည်းစစ်ဆေးစမ်းသပ်လို့ရပါတယ်။
Sources: Dr. Mei MeiKo (Family Physician)
HIV ပိုးကူးစက်ခံထားတဲ့ လူတစ်ယောက်က သူ့အဖော်ကို ပါးစပ်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံတာမျိုး လုပ်ပေးတဲ့အခါ အဲဒီ့အဖော်က HIVပိုး ကူးစက်ခံရနိုင်ချေရှိပါသလား?
ပါးစပ်က HIV ပိုးကူးစက်နိုင်တဲ့ နေရာမဟုတ်တာကြောင့် အမျိုးသား(သို့)အမျိုးသမီးတွေမှာ ပါးစပ်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံတာတဆင့် HIV ပိုးကူးစက်နှုန်းက အလွန်နည်းပါတယ်။တံတွေးမှာ ဗိုင်းရပ်(စ်)ကို ပြိုကွဲစေတဲ့ အင်ဇိုင်းပါဝင်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေအတွက် သူတို့ ပါးစပ်နဲ့ မိန်းမကိုယ်အရည်ထိတွေ့တာကြောင့် ပါးစပ်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံတဲ့သူတွေအတွက် ပါးစပ်နဲ့လိင်ဆက်ဆံတာကနေ ရောဂါကူးစက်မှုနည်းပါတယ်။ ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကနေ မကူးစက်သေးတဲ့ သူဆီကို ပါးစပ်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံတာကနေ HIV ပိုးကူးစက်ခံတာကနည်းပါတယ်။ ဓမ္မတာလာနေတဲ့ အမျိုးသမီးကို ပါးစပ်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံတာက ရောဂါပိုးကူးစက်မှုနှုန်းများစေပါတယ်။ သွေးက မိန်းမကိုယ်အရည် ထက် HIV ပိုး ကူးစက်မှုပိုများပါတယ်။
အမျိုးသားတွေအတွက် ပါးစပ်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံတာက ကူးစက်မှုပိုနည်းပါတယ်။ ပါးစပ်မှာ ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာနဲ့ သွားဖုံးမှာ သွေးထွက်နေရင် HIV ပိုးကူးစက်မှုလမ်းကြောင်းကို ဖန်တီးပေးပြီး ရောဂါပိုးကူးစက်မှုနှုန်းကိုတိုးလာစေပါတယ်။ ပါးစပ်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံတာကနေ HIV ပိုးကူးစက်ခံရတာတဲ့ ကိစ္စက အနည်းငယ်ရှိပြီး ပါးစပ်ထဲကို သုက်ရည်စွန့်ထုတ်တဲ့အခါ ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။
တံတွေးက HIV ပိုးမကူးစက်တာကြောင့် ပါးစပ်နဲ့လိင်ဆက်ဆံတာခံရတဲ့သူက ရောဂါပိုးကူးစက်ဖို့ အလားအလာနည်းပါတယ်။ လိင်ဆက်ဆံရာက တဆင့် ကူးစက်နိုင်တဲ့ အခြားရောဂါပိုးတွေရှိတာက ပါးစပ်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံနေချိန်မှာ HIV ပိုးကူးစက်နိုင်ချေ များပါတယ်။
HIV ပိုးကူးစက်နိုင်တာကို လျော့ချနိုင်ဖို့ အမျိုးသားတွေ အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ ပါးစပ်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံနေချိန်မှာ ကွန်ဒုံးကို အသုံးပြုပါ။ အဖော်အသစ်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံနေရင် စဉ်းစားပါ။
နမ်းတာကနေ လိင်ဆက်ဆံရာကတဆင့် ကူးစက်နိုင်တဲ့ ရောဂါပိုး (STI) တွေ ကူးစက်နိုင်ပါသလား?
နမ်းတာကနေ လိင်ဆက်ဆံရာကတဆင့် အခြားရောဂါပိုးတွေ ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ နမ်းခြင်းက မိန်းမကိုယ်လမ်းကြောင်းကနေ လိင်ဆက်ဆံတာ၊ စအိုဝကနေ လိင်ဆက်ဆံတာ၊ ပါးစပ်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံတာတွေထက် ရောဂါကူးစက်နိုင်ချေနည်းပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အရည်ကနေ လိင်ဆက်ဆံရာကတဆင့် ကူးစက်နိုင်တဲ့ ရောဂါပိုးတွေကူးစက်နိုင်ပြီး သွေးနဲ့ သုက်ရည်လိုမျိုး တံတွေးက ရောဂါပိုးကူးစက်နိုင်ချေ နည်းပါတယ်။ တံတွေးနဲ့ ရောဂါပိုးကူးစက်နိုင်ချေရှိရင်တောင်မှ ပါးစပ်မှာ အနာရှိမှ ရောဂါကူးစက်နိုင်တာပါ။ ရောဂါပိုး ကူးစက်နိုင်ချေရှိတာကို သတိပြုဖို့ နဲ့ အဖော်ရွေးချယ်တဲ့အခါ သတိပြုဖို့ အကြံပေးထားပါတယ်။
ရေယုန်ကတော့ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ အများဆုံးရှိတဲ့ လိင်ဆက်ဆံရာကတဆင့် ကူးစက်နိုင်တဲ့ ရောဂါပိုးဖြစ်ပြီး နမ်းတာကနေ ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ ရေယုန်ဆိုတာက အရေပြားကနေ အလွယ်တကူ ကူးစက်နိုင်တဲ့ ပိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ တစ်သျှူးတွေဖြစ်တဲ့(နှုတ်ခမ်း၊မျက်ခွံ၊လိင်အင်္ဂါတစ်ဝိုက်နဲ့ စအိုဝထိတွေ့မှုကနေ ရောဂါပိုးကူးစက်တာပါ။ အမျိုးသမီးတွေက ဗိုင်းရပ်(စ်)ပိုးကူးစက်တာ ပိုများပါတယ်။ ပါးစပ်ထဲနဲ့ နှုတ်ခမ်းပေါ်မှာ အနာဖုတွေရှိတာက ရေယုန်ရဖို့ အခွင့်အလမ်းများပါတယ်။ လွယ်လွယ်ကူကူ ကုသတာကလွဲလို့ ပါးစပ်ရေယုန်က ပါးစပ်ထဲနဲ့ နှုတ်ခမ်းပေါ်မှာ အနာတွေကို ယားယံတာတွေဖြစ်စေပါတယ်။ ရေယုန်က ကူးစက်ခံရဆုံးပိုးဖြစ်တာကြောင့် မနမ်းခင် သင့်အဖော်အသစ်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းကိုမြန်မြန် စစ်ဆေးကြည့်ရှုဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်။
အများသုံးအိမ်သာတွေကနေ လိင်ဆက်ဆံရာတဆင့် ကူးစက်နိုင်တဲ့ ရောဂါပိုးတွေ ကူးစက်နိုင်ပါသလား?
မကူးစက်နိုင်ပါ။ အများသုံး အိမ်သာတွေ ထိတွေ့ အသုံးပြုရာမှ လိင်ဆက်ဆံရာကတဆင့် ကူးစက်နိုင်တဲ့ ရောဂါပိုးတွေ ကူးစက်နိုင်တဲ့ သက်သေ အထောက်အထားမရှိပါ။
လိင်ဆက်ဆံရာကတဆင့် ကူးစက်နိုင်တဲ့ရောဂါပိုးတွေက ကလေးငယ်ဆီ ကူးစက်နိုင်ပါသလား?
အစောပိုင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်မှုမှာ အမျိုးသမီးအများစုမှာ STIs ရှိမရှိ စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ရပါတယ်။အချို့ STIs က ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတောအတွင်း သန္ဓေသားကို ကူးစက်နိုင်ပြီး အမျိုးသမီးတယောက်က ကလေးမွေးနေစဉ်မှာ STIs ရှိရင် ကလေးကို ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ကို ယ်ဝန်ဆောင်စဉ် အတောအတွင်း တစ်ဦးထက်ပိုပြီး လိင်ဆက်ဆံဖော်အများကြီးနဲ့ လိင်ဆက်ဆံရင် အချိန်တိုင်း ရာဘာကွန်ဒုံးကို အသုံးပြုဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သင်က ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီး သင့်အဖော်က အခြားသူတွေနဲ့ လိင်ဆက်ဆံနေတာကို သံသယရှိရင် STIs ရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို ဆရာဝန်နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး သင့်ကလေးကိုကူးစက်နိုင်စေတဲ့ အခွင့်အရေးကို ဘယ်လိုလျှော့ချရမလဲဆိုတာဆွေးနွေးပါ။
STDsပျံ့ နှံ့နေတာကို ဘယ်လိုရှောင်ကြဉ်နိုင်ပါသလဲ?
သင့်မှာ STDs ရှိရင် ဆရာဝန်နဲ့တွေ့ပြီး ကုသမှုခံယူတဲ့အချိန်ထိ လိင်ဆက်ဆံဖို့ ရပ်တန့်ထားပါ။
ကုသမှုခံယူဖို့ ဆရာဝန်ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်ကို လိုက်နာပါ။
သင်လိင်ဆက်ဆံတဲ့အချိန်တိုင်း(အထူးသဖြင့် လိင်ဆက်ဆံဖော်အသစ်တွေနဲ့ ဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်)ကွန်ဒုံးသုံးပါ။
ဆရာဝန်က အဆင်ပြေသွားပြီလို့ ပြောတဲ့အချိန်ထိ လိင်ဆက်ဆံဖို့ ထပ်မလုပ်ပါနဲ့။
ထပ်မံစစ်ဆေးမှုလုပ်ဖို့ ဆရာဝန်ဆီ ပြန်သွားပါ။
HIV ပိုးကူးစက်မခံရအောင် ကာကွယ်ဆေးကြိုသောက်နိုင်သလား။
HIV ပိုး ကူးစက်မခံရအောင် ကာကွယ်ဆေး သောက်လို့မရပါဘူး။ အကယ်၍များ အကာအကွယ်မဲ့ လိင်ဆက်ဆံမိလိုက်တယ်၊ အဓမ္မပြုကျင့်မှု ခံခဲ့ရတယ်၊ ဆေးရုံဆေးခန်းတွေမှာ အသုံးပြုပြီးသားအပ်နဲ့ ဆူးမိတယ် စတဲ့ ရောဂါပိုးနဲ့ ထိတွေ့မိလိုက်တဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေမှာတော့ ဆေးသောက်လို့ ရပါတယ်။ ကြိုတင်ကာကွယ်တာ မဟုတ်ဘဲ ဖြစ်ပြီးမှ ရောဂါမကူးအောင် သောက်ရတဲ့ ဆေး ဖြစ်ပါတယ်။ Post exposure prophylaxis (PEP) လို့ ခေါ်တဲ့ ပိုးသတ်ဆေးနှစ်မျိုး ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ဆေးပါ။ Duovir စသဖြင့် ဆေးနာမည်လည်း အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ဆေးဆိုင်တွေမှာ လွယ်လွယ်ကူကူ ၀ယ်လို့မရနိုင်ပေမယ့် ဆေးရုံ ဆေးခန်းတွေမှာတော့ ရနိုင်ပါတယ်။
Sources: Dr Phyo Thiha
STDsရောဂါက တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီး ကူးစက်ခံရပါသလား?
ကူးစက် ခံရနိုင်ပါတယ်။ အရင်က ကုသမှုခံယူပြီးတောင်မှ ကလင်မိုင်ဒီးယား၊ ဆီးပူညောင်းကျဂနိုရောဂါ၊ ဆစ်ဖလစ်ကာလသားရောဂါတွေ အစရှိတဲ့ ဘက်တီးရီးယားရောဂါပိုးတွေဟာ တကြိမ်ထက်ပိုပြီး ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်အဖော်တွေစစ်ဆေးမှုခံယူဖို့၊ ကုသမှုခံယူဖို့နဲ့ ကွန်ဒုံးတွေကို စနစ်တကျအသုံးပြုဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ HIV ရောဂါကူးစက်ခံရသူတွေအတွက် ဘယ်လိုဆေးဝါးတွေ ရှိပါသလဲ။
HIV ပိုးရှိနေတဲ့သူတွေကို Anti-retroviral therapy (ART) လို့ ခေါ်တဲ့ ဆေးတွေ တိုက်ပါတယ်။ ဒီဆေးတွေက ပိုးအရေအတွက်ကို ပွါးမလာအောင် ထိန်းပေးပါတယ်။ အစိုးရဆေးရုံတွေအပြင် NGO အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း ပေးနေပါတယ်။ အဲဒီအပြင် ဒီရောဂါပိုးဟာ ကိုယ်ခံအားကို ကျစေတာမို့ ခုခံအားကျလို့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်လာတဲ့ တခြားရောဂါပိုးတွေ (ဥပမာ တီဘီပိုး) ကိုလည်း ကုသပေးတာမျိုး ရှိပါတယ်။
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာအတွက် ကင်ဆာမဖြစ်ခင်အကြိုအဆင့် ကို သိနိုင်ဖို့အတွက် စစ်ဆေးလို့ရပါတယ်။ အဲဒီလို စစ်ဆေးလို့ရတဲ့ နည်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီထဲက အသုံးများတာကတော့ သားအိမ်ခေါင်းချွဲကို ယူစစ်တာရယ်၊ သားအိမ်ခေါင်းကို ဆေးရည်တစ်မျိုး တို့ပြီး စစ်ဆေးတာရယ်ပါ။ ချွဲယူပြီး စစ်တဲ့နည်းကတော့ ရက်ပိုင်းလောက် အဖြေစောင့်ရမယ်၊ ဆေးရည်တို့တဲ့နည်းကတော့ ချက်ချင်းအဖြေသိနိုင်ပါတယ်။
အမျိုးသားတွေနဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ဘယ်သူက လိင်ဆက်ဆံရာကတဆင့် ကူးစက်နိုင်တဲ့ ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရတာ အဖြစ်များဆုံးလဲ?
ဇီဝအချက်အလက်တွေကြောင့် အမျိုးသားတွေထက် အမျိုးသမီးတွေမှာ ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရမှုပိုများပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာ အမျိုးသားတွေထက် သားအိမ်ခေါင်းနဲ့ မိန်းမကိုယ်နေရာတွေမှာ ထိတွေ့မှုပိုများပြီး လိင်ဆက်ဆံနေစဉ်အတောအတွင်း မိန်းမကိုယ်တစ်သျှူးတွေမှာ အသေးစားပွန်းပဲ့မှုတွေဖြစ်ပေါ်ပြီး ရောဂါပိုးကူးစက်နိုင်တဲ့ လွယ်ကူတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်လာတယ်။
HIVရောဂါပိုးက ပွေ့ဖက်တာတွေ၊ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာတွေ၊ ခြင်ကိုက်တာတွေကနေ တဆင့် ကူးစက်နိုင်ပါသလား?
HIV ပိုးက တံတွေး၊ ချွေးနဲ့ အသားချင်းထိတွေ့မှုကနေ မကူးစက်နိုင်ပါ။ နှုတ်ခမ်းချင်း ထိ အနီးကပ် နမ်းခြင်း၊ ပွေ့ဖက်ခြင်း၊ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်း၊ အစားအစာဝေမျှ စားသောက်ခြင်း၊ အဝတ်အစားဝတ်ဆင်ခြင်းနဲ့ အိမ်သာထိုင်ခုံအားလုံး အသုံးပြုခြင်းတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်(စ်)ရောဂါပိုးက လူ့ခန္ဓာကိုယ် အပြင်မှာ အချိန်ကြာကြီး မရှင်သန်နိုင်ပါဘူး။ ခြင်ကိုက်တာကလည်း HIVပိုးမကူးစက်နိုင်ပါ။ HIVပိုးက သွေး၊ လိင်ဆက်ဆံရာကထွက်လာတဲ့ အရည်တွေ(သုက်ရည်၊သုက်ရည်မထွက်ခင် အရင်ထွက်တဲ့ အရည်ကြည်၊မိန်းမကိုယ်ကထွက်တဲ့ အရည်)နဲ့ HIV ပိုးကူးစက်ခံထားရတဲ့သူရဲ့ နို့ရည်ကနေလည်း ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
ကွန်ဒုံးတွေက လိင်ဆက်ဆံရာကတဆင့်ကူးစက်နိုင်တဲ့ အခြားရောဂါပိုးတွေကို ကာကွယ်ဖို့ ထိရောက်မှုရှိပါသလား?
၁၀၀%ထိရောက်မှု မရှိပေမဲ့ မှန်မှန်ကန်ကန် စနစ်တကျ သုံးစွဲပါက သုက်ရည် မိန်းမကိုယ်အရည်လို ခန္ဓာကိုယ်အရည်တွေက ရောဂါပျံ့လွယ်တာကြောင့် လိင်ဆက်ဆံရာကတဆင့် ကူးစက်နိုင်တဲ့ရောဂါပိုးတွေကို ကာကွယ်ဖို့ ကောင်းတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ အမျိုးသားသုံးကွန်ဒုံးက ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သုံးနိုင်ပြီး လိင်ဆက်ဆံစဉ်အတောအတွင်း HIV ပိုးကူးစက်တာကို လျော့ချဖို့နဲ့ လိင်ဆက်ဆံရာကတဆင့် ကူးစက်နိုင်တဲ့ အခြားရောဂါပိုးကူးစက်တာကို လျှော့ချဖို့ တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ အနှံ့က အဖွဲ့အစည်းတွေက ကိုယ်ဝန်ဆောင်တာကို ကာကွယ်ဖို့နဲ့ HIV နဲ့ လိင်ဆက်ဆံရာကတဆင့် ကူးစက်နိုင်တဲ့ အခြားရောဂါပိုးတွေကူးစက်တာကို ကာကွယ်ဖို့ ကွန်ဒုံးအသုံးပြုရန် အကြံပြုထောက်ခံထားပါတယ်။
အမျိုးသမီးသုံးကွန်ဒုံးတွေက ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်မရပေမဲ့ မလိုချင်သေးတဲ့ ကိုယ်ဝန်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံရာကတဆင့် ကူးစက်နိုင်တဲ့ အခြားရောဂါပိုးတွေကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ အမျိုးသမီးကွန်ဒုံးတွေက သားဆက်ခြားသန္ဓေတားတာနဲ့ လိင်ဆက်ဆံရာကတဆင့် ကူးစက်နိုင်တဲ့ ရောဂါပိုးတွေကိုထိန်းချုပ်ပေးပါတယ်။
ကျွန်တော့်မှာ လိင်ဆက်ဆံရာကတဆင့် ကူးစက်နိုင်တဲ့ ရောဂါပိုးရှိရင် ဘယ်လိုသိနိုင်မှာလည်း?
မစစ်ဆေးပဲ ရောဂါပိုးရှိမရှိ သိဖို့ နည်းလမ်းမရှိပါဘူး။ လိင်ဆက်ဆံရာကတဆင့် ကူးစက်နိုင်တဲ့ ရောဂါပိုးတွေမှာ သိသာထင်ရှားတဲ့ လက္ခဏာမရှိပါဘူး။ သင်က လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်ကြွနေရင် STD စစ်ဆေးမှုက သင့်ရဲ့ ပုံမှန်စစ်ဆေးမှု တစိတ်တပိုင်းဖြစ်သင့်ပါတယ်။ STD ရှိတယ်လို့ စိုးရိမ် ပူပန်နေရင် ဆရာဝန်ဆီသွားပြီး စစ်ဆေးမှုခံယူပါ။
မိမိကိုယ်တိုင် လိင်ဆက်ဆံရာကတဆင့် ကူးစက်နိုင်တဲ့ အခြားရောဂါပိုးတွေ ကူးစက်တာကို ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲ?
သင့်ကိုယ်သင် လိင်ဆက်ဆံရာကတဆင့် ကူးစက်နိုင်တဲ့ ရောဂါပိုးတွေကိုကာကွယ်ဖို့ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အခြေခံအချက်လေးတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်။
-STDsကို ကာကွယ်ဖို့ အသေချာဆုံးနည်းလမ်းကတော့ လိင်မှုကိစ္စရှောင်ကျဉ်တာ
-တစ်ဦးထက်ပိုတဲ့ လိင်ဆက်ဆံရေးမျိုးသင့်မှာရှိရင်(သို့) သင့် လိင်ဆက်ဆံဖော်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုမသိရင် လိင်ဆက်ဆံတဲ့အချိန်တိုင်း ရော်ဘာကွန်ဒုံးအသုံးပြုပါ။ (သင်က ချောဆီအသုံးပြုရင် ရေကိုအခြေခံထုတ်ထားတဲ့ ချောဆီကို အသုံးပြုပါ။)
-လိင်ဆက်ဆံဖော် အရေအတွက်ကို ကန့်သတ်ထားပါ။ လိင်ဆက်ဆံဖော်များလေ STD ကူးစက်ခံရဖို့ အခွင့်အရေးများလေပါပဲ။ သင့်မှာလိင်ဆက်ဆံဖော်အများကြီးရှိရင် ကွန်ဒုံးသုံးပြီး ကျန်းမာအောင် နေထိုင်ဖို့နဲ့ လတိုင်းမှာ စစ်ဆေးမှုလုပ်ပါ။
-ဂရုစိုက်ပြီး သင့်ရဲ့ လိင်ဆက်ဆံဖော်ကို ရွေးချယ်ပါ။ STIs ရှိမယ်လို့သံသယရှိတဲ့သူနဲ့ လိင်မဆက်ဆံပါနဲ့။ သင့်အဖော်ကို ကြည့်ပြီး STIsရှိတယ်လို့လည်း အမြဲပြောလို့မရပါဘူး။ ဒါ့အပြင် သင့်အဖော်က မစစ်ဆေးထားရင် သူ့မှာ STDs ရှိတယ်ဆိုတာ သူတို့ကိုယ်တိုင်တောင် မသိပါဘူး။
-STDs စစ်ဆေးမှုခံယူပါ။ အခြားသူကိုလည်း ရောဂါပိုးမကူးစက်ပါစေနဲ့။
-လိင်မဆက်ဆံခင် အရက်(သို့)မူးယစ်ဆေးဝါးမသုံးပါနဲ့။ သင် အရက်သောက်ထားရင် (သို့) သောက်ထားတာများသွားရင် သင်ကွန်ဒုံးသုံးဖို့ အခွင့်အလမ်းနည်းသွားပါတယ်။
-STDs ရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာ အမှတ်အသားတွေကို သိထားပါ။ သင်ကိုယ်တိုင်နဲ့ သင့်ရဲ့ လိင်ဆက်ဆံဖော်တွေမှာ လက္ခဏာတွေကို ရှာဖွေကြည့်ပါ။ ဒီမှာ အချက်အလက်တွေကို ပိုပြီး ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
-STDsအကြောင်းသင်ယူပါ။ ပိုသိလေ သင်ကိုယ်တိုင် ပိုကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
STDsကို ဘယ်လို ကုသမှုခံယူမလဲ?
STDsရောဂါတွေကို ပဋ္ဋီဇီဝဆေးတွေနဲ့ ကုသလို့ရပါတယ်။
STDsရောဂါကို ပဋ္ဋီဇီဝဆေးတွေနဲ့ ကုတဲ့အခါ ရောဂါလက္ခဏာတွေပျောက်ကင်းသွားတောင်မှ ဆေးတွေအားလုံးသောက်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သင်ဖျားနာတာကို ပျောက်ကင်းဖို့ တခြားသူရဲ့ဆေးတွေကို ယူမသောက်ပါနဲ့။ အဲဒီလိုလုပ်ရင် ရောဂါစစ်ဆေးမှုခံယူဖို့နဲ့ ကုသမှုခံယူဖို့ ပိုပြီးခက်ခဲသွားပါမယ်။ သင်ကလည်း သင့်ဆေးတွေကို အခြားသူတွေကို မဝေမျှပါနဲ့။ အချို့ ဆရာဝန်တွေက သင့်အဖော်ကို ပဋ္ဋီဇီဝဆေးအပိုတွေထပ်ပေးတာကြောင့် တချိန်တည်းမှာပဲသင်နဲ့ သင့်အဖော် ကုသမှုခံယူနိုင်ပါတယ်။
လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက် ယောကျာ်းလိင်တံ(သို့)မိန်းမကိုယ်ကိုဆေးကြောသန့်စင်ခြင်းက STDs ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို လျော့ချပေးနိုင်ပါသလား?
အထူးသဖြင့် လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက် မျိုးပွားအင်္ဂါကျန်းမာရေးက အရေးကြီးပါတယ်။မျိုးပွားအင်္ဂါကိုဆေးကြော သန့်စင်ခြင်းက STDs ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သက်သေအထောက်အထားမရှိပါဘူး။အမှန်တော့ မိန်းမကိုယ်အထဲကိုဆေးကြောသန့်စင်ခြင်းက HIV ပိုးနဲ့ တင်ပါးဆုံပိုင်းရောင်ရမ်းရောဂါ အပါအဝင် STDs ရောဂါကူးစက်တာတွေကို တိုးစေပါတယ်။ ရောဂါပိုးကူးစက်တာကို လျော့ချဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက ကွန်ဒုံးလိုမျိုး အကာအကွယ်ကိုသုံးပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အတွေ့ရအများဆုံး လိင်မှတဆင့်ကူးစက်ရောဂါတွေက ဘာတွေလဲ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အတွေ့ရအများဆုံး လိင်ကတစ်ဆင့် ကူးစက်တဲ့ရောဂါတွေကတော့ Chlamydia လို့ခေါ်တဲ့ ပိုးဝင်ခြင်း၊ ရေယုန်ပေါက်ခြင်း၊ မိန်းမကိုယ်မှိုစွဲခြင်း၊ HIV ပိုးကူးစက်ခံရခြင်းနဲ့ ဆီးပူညောင်းကျ လို့ လူသိများတဲ့ ဂနိုရောဂါတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ အတွေ့ရများလာတဲ့ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာရောဂါဟာလည်း လိင်ကတစ်ဆင့် ကူးစက်တဲ့ရောဂါပိုးကြောင့် ဖြစ်တာမို့လို့ ဒီရောဂါကိုလည်း လိင်ကတစ်ဆင့် ကူးစက်တဲ့ ရောဂါစာရင်းထဲ ထည့်လာကြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ HIV အပါအဝင် လိင်မှတဆင့်ကူးစက်တဲ့ရောဂါတွေကို ဘယ်မှာ စစ်ဆေးနိုင်လဲ။
ကာလသားရောဂါတွေကို အစိုးရဆေးရုံ ကာသားရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဌာနတွေ၊ တချို့သော NGO တွေ၊ နီးစပ်ရာ ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံတွေမှာ စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ သွေးစစ်ဆေးခြင်း၊ ထွက်တဲ့ပြည်၊ အဖြူရည်တွေကို ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးတာမျိုးတွေလည်း လုပ်လို့ ရပါတယ်။ လတ်တလောအနေအထားအရ ဆစ်ဖလစ်ရောဂါ၊ HIV ပိုး၊ မိန်းမကိုယ်မှိုစွဲခြင်းလို ရောဂါမျိုးတွေအတွက် စစ်ဆေးကြည့်လို့ ရနိုင်ပါတယ်။ အဖြေသိရဖို့အတွက်တော့ ရက်ပိုင်းလောက် စောင့်ဆိုင်းဖို့လိုပါတယ်။